ရန်ပိုင်| December 24, 2012 | Hits:17,189
Tun Tun Ko December 24, 2012 - 9:22 pm မဟုတ်သေးပါဘူး ငါတို့ဖာသာ ငါတို့ ဘာထုတ်ထုတ်ပေါ့ ဘာဖြစ်နေကြတာတုန်း???
Reply မောင်မောင်ကျော်ဝင်း December 24, 2012 - 10:10 pm “၀ယ်သာမကောင်းရင်နိုင်ငံခြားကိုမှာလေ” ဆိုတာထက်ဆိုးနေပါပေါ့လားအရပ်ကတို့၊ကြည့်
Reply Salai Lian December 24, 2012 - 10:46 pm If the nuclear program is for peaceful manner as for electric power and medical research, the Defense Ministry needs to stay away from handling this program. It must be handled by Ministry of Energy. At the same time, Burmese government needs to co-operate with the UN(IAEA). If incident happens like in Russia and in Japan, it can become man-made disaster beyond comprehensible. We do have enough natural resources in Burma, nuclear program must be put aside, and the government needs to make sure the citizens are well served.
Reply Saw Robert December 25, 2012 - 11:27 am I like your comment and suggestion
Reply INO December 25, 2012 - 8:43 am အဖာတရာနဲ့ လိမ်ဆင်ကြီးကို မသိကြသေးရင်လည်း နောက်အနှစ်(၅၀)ဆက်ပြီး ဆင်းရဲကြဦးပေါ့။
Reply James December 25, 2012 - 7:58 pm နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံး ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးဇော်ဌေးက “ဦးစီးချုပ် ပြောတဲ့စကားက ကင်ဆာကုသတာတို့၊ ဓာတ်မှန်ရိုက်တာတို့ လုပ်တဲ့ ရေဒီယို အိုင်ဆိုတုတ် သတ္တိကြွတာကို ရည်ရွယ်တာပါ။ နျူကလီးယားကို ပြောတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကို နားလည်မှု လွဲမှားကြတာပါ” ဟု ဆိုသည်။
Reply James December 25, 2012 - 8:06 pm စစ်သားဆိုတာမိန့်နာခံဘို့ဘဲ..အခုလဲ..ဒု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ပထမဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးပြောခိုင်းတဲ့အတိုင်း…ပြော၇တာပါ….တကယ်တော့..၂ယောက်စလုံး..ဘာမှမသိပါဘူး။
Replyွှ့Thanshwe December 25, 2012 - 8:20 pm ဓါတ်ပုံထဲမှာ.ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကြည့်၇တာ…ပထမဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးပောတာကို..မေ့သွားမှာဆိုးလို့..အလွတ်ကျက်နေပုံ၇တယ်
Reply tuntunko December 29, 2012 - 8:07 pm မင်းတို့ ရဲ့ သတ္တိနဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ အစ်ုးရကို ရထားတာ ဘာမှလျှောက်ရေးမနေေေောကနဲ့ တော့